SomaliTalk.com » 2011 » December » 09
Home » Archive Maalinta December 9th, 2011
Diyaaradaha Kenya oo Duqeeyey Magaalada Baardheere
Duqaynta oo ku soo beegantay Xilli uu Xoghayaha Guud ee UN-ka oo kulan la qaatay Madaxda Kenya iyo Mahiga….. Diyaaradaha Dalka Kenya ayaa duqeeyey magaalooyin ku yaal Soomaaliya, gaar ahaan diyaaradaha dagaalka ee Kenya ayaa lagu soo waramay in ay duqeeyey magaalada Baardheere kuna diley dad rayid ah. Duqaymaha ugu dameeyey ayaa ku soo beegmay xilli xoghayaha guud ee Qarammada Midoobey Ban-ki...
Waxaa ka dhacay magaalada Roma(Italia) december 1-2 shirar qurbajooga somaliyeed oo u qayb galay Mohamed Abdullahi Mohamed, ra’iisulwasaarihii hore ee somaliya. Shirarkaa waxaa ka soo qayb galay somali badan, xildhibaano ka socdey dhammaan xisbiyada talyaaniga, guddomiyaha ururka xuquuqul insaanka dalkaa, jaraa’ídka dalkaa ugu waaween iyo tv-da.waxaan halka hordhac ahaan ugu soo gudbinaynaa bulshada...
Soomaaliya, waa ummad geeridu jiho kasta uga timid!
Cinwaanka qormadaan, Soomaaliya waa ummad geeridu jiho kasta uga timid, waxaan ka soo qaatay maqaal uu Axmed Mansuur, weriye reer Kuwait ahi, daabacay dhammaadkii qarnigii tegey. Read More →
Prof. Gaas: Waxaa Xurgufi ka dhexaysaa Al-Shabaab iyo Madaxweynaha DFKMG, Laakiin aniga iyo iyaga xurgufi nagama dhaxayso… nabadna waan la qaadan karaa…. C/weli Gaas oo sheegay in uusan ka warhayn Hadalkii Wasiirkiisa Gaashaandhiggu ku sheegay in xukuumadiisu soo dhaweyneyso ciidan Itoobiya oo gala Soomaaliya….. Telefishanka Aljazeera oo waraysi la yeeshay ra’iisul wasaaraha...
Hay’adda HIRDA oo Magaalada Muqdisho ku qabatay dood ku saabsan habka waxbarashada Soomaaliya
Hay’adda Himilo Relief and Develompment Association (HIRDA) ayaa ku > qabtay Muqdisho dood ku saabsan habka waxbarashada Soomaaliya, taasoo > ay kasoo qaybgaleen dallada waxbarashada, jaamacadaha, ururrada > bulshada, haya’daha waxbarashada, aqoonyahanno iyo mas’uuliyiin ka > socday wasaaradda waxbarashada DKMG ah. > > Dooddan oo socotay laba maalmood 6-dii illaa...